UNGAKHUBAZA KANJANI IZIQEPHU ZOKUDLALA ZE-NETFLIX (I-YOUTUBE, I-AMAZON PRIME VIDEO AUTO PLAY) - I-WINDOWS 10
Ungakhubaza kanjani iziqephu zokudlala ze-Netflix (i-youtube, i-Amazon Prime Video auto play)
Kumasayithi wokusakaza adumile njengeNetflix, i-Youtube, i-Amazon Prime Video, okuqukethwe kwe-Hulu okubandakanya iziqephu ezingaphezu kwesisodwa kuzoqhubeka nokudlala okuqukethwe okulandelayo ngokuzenzekelayo. Uma kungasekho iziqephu kumdlalo we-TV, okuqukethwe okuphakanyisiwe kuzoqala ukudlala ngokuzenzekelayo. Lesi isici esihle kumarathoni ochungechunge olude lwe-TV, kepha abanye abasebenzisi bakhetha ukukhetha ngesandla lapho isiqephu esilandelayo sidlala. Uma ungafuni i-Netflix youtube, i-Amazon Prime Video izodlala isiqephu esilandelayo, ukukhushulwa noma ukubuka kuqala kusuka kolunye uhlelo njengoba uqeda ukudlala isiqephu sokugcina, Nakhu ukuthi ungakuvimbela kanjani ukudlala ngemuva noma ukumisa iNetflix ekudlaleni ngokuzenzekelayo isiqephu esilandelayo AmaTrailer & Ukubuka kuqala ngokuzenzakalela.
Okuqukethwe umbukiso 1 Misa ukudlala kwesici ku-Netflix ezimbili Misa ukuzidlalela amavidiyo youtube 3 Misa ukudlala ngokuzenzekelayo ku-Amazon Prime Video 4 Ungakucisha kanjani ukudlala ngokuzenzekelayo ku-Hulu 5 Vala ukudlala ividiyo ye-facebook 6 Misa ukudlala ngokuzenzekelayo amavidiyo ku-Twitter 7 Vala uhlelo lokusebenza lokudlala i-Instagram 8 Misa ukudlala ngokuzenzekelayo kwevidiyo ku-LinkedIn
Misa ukudlala kwesici ku-Netflix
Misa iNetflix Ekudlaleni Isiqephu Esilandelayo ngokuzenzakalela kulula kakhulu. Udinga kuphela ukwenza lolu shintsho kuzilungiselelo zakho ze-akhawunti ye-Netflix.
Okokuqala vula INetflix bese ungena ngemvume ku-akhawunti yakho usebenzisa isiphequluli seWebhu sanamuhla.
Dlulisa isithonjana se- 'Amaphrofayli' ekhoneni eliphezulu kwesokudla kwesikrini bese uqhafaza ku-Akhawunti kusuka kumenyu eyehlayo.
Lapha ngaphansi kwekhasi le-Akhawunti Yami, skrolela phansi uze uthole isigaba sephrofayela yami.
Lapho, thola bese uqhafaza Izilungiselelo zokudlala .
Manje Ngaphansi kokuthi 'Dlala ngokuzenzakalela,' ungahloli ' Dlala isiqephu esilandelayo ngokuzenzakalela ’Bese uqhafaza ku-‘Save.’
Yilokho i-Netflix kuwebhu noma yiluphi uhlelo lokusebenza olusekelwa ngeke lusadlala isiqephu esilandelayo ngokuzenzakalela.
Misa ukuzidlalela amavidiyo youtube
Uma ufuna isitobhi, khubaza isici sokudlala ividiyo se-youtube kudeskithophu
vula I-Youtube bese udlala ividiyo kusiphequluli sewebhu.
Chofoza isilayida esiluhlaza okwesibhakabhaka 'Ukuzidlalela' phezulu kwekholomu 'Phezulu Okulandelayo' kwesokudla sevidiyo.
uma ukhetha ividiyo eyingxenye yohlu lwadlalwayo ‘olungami,’ isilayida esiluhlaza okwesibhakabhaka ngeke sivele.
Lapho isilayida siphenduka mpunga, ukuzidlalela kukhutshazwa futhi ividiyo elandelayo ephakanyisiwe ngeke iqale. Isiphequluli sakho kufanele sikhumbule izilungiselelo ngokuzayo lapho ufika ekhasini.
buyela emuva kusibuyekezo sangaphambilini samawindows
Ukucisha isici sokudlala ngokuzenzekelayo kuhlelo lokusebenza lwe-youtube
Thepha isithombe sakho sephrofayela ekhoneni eliphezulu kwesokudla.
Thepha Amasethingi> Ukudlala ngokuzenzekelayo> Ukudlala ngokuzenzekelayo ekhaya.
Ungakhetha Cishiwe ukuyicisha ngokuphelele, noma I-Wi-Fi kuphela ukuqinisekisa ukuthi ayidli idatha yakho.
Misa ukudlala ngokuzenzekelayo ku-Amazon Prime Video
Ukumisa Ukuzidlalela ku-Amazon Prime Video
Vakashela Prime Video kusiphequluli sakho sewebhu bese ungena ngemvume ku-akhawunti yakho.
Chofoza kusithonjana semenyu ekhoneni eliphezulu kwesokudla bese ukhetha I-Akhawunti nezilungiselelo .
Hambisa kuthebhu yokudlala, Lapha ngaphansi kokukhetha kokuzidlalela kokuzenzakalelayo, khetha inkinobho yomsakazo Valiwe
Ungakucisha kanjani ukudlala ngokuzenzekelayo ku-Hulu
Ukumisa ividiyo edlala ngokuzenzekelayo ku-Hulu, Vula Okusemthethweni Ikhasi lewebhu le-Hulu bese ungena ku-Akhawunti yakho.
Bese Qala iVidiyo, bese upheqa inkinobho ethi 'Izilungiselelo 'ezansi kwesidlali.
Ibukeka njengegiya futhi ibekwe phakathi kwezinkinobho ze- 'Volume' ne 'Full Screen'.
Chofoza okuthi 'Valiwe' ngaphansi kwesilungiselelo 'sokudlala ngokuzenzakalela'. Isici kufanele sihlale sikhubazekile kuze kube yilapho sisivula futhi.
Vala ukudlala ividiyo ye-facebook
Ukucima ukudlala amavidiyo ku-Facebook
Ukumisa amavidiyo ukuthi angadlali ngokuzenzekelayo kwikhompyutha yakho:
Kusukela ngakwesokudla phezulu ku-Facebook, chofoza bese ukhetha Amasethingi .
Chofoza Amavidiyo kumenyu engakwesokunxele.
Chofoza imenyu yokudonsela phansi eduze Dlala ngokuzenzakalela amavidiyo bese ukhetha Cishiwe .
Ukumisa ukudlala ividiyo ividiyo yohlelo lokusebenza ukuvula izilungiselelo zohlelo lokusebenza pheqela phansi uze uthole Ukudlala ngokuzenzakalela kwevidiyo, thepha futhi uguqule noma uguqule i-Wi-Fi kuphela ukumisa ukudlala amavidiyo ngokuzenzekelayo.
windows 10 intambo_stuck_in_device_driver
Kuhlelo lokusebenza lwe-Facebook lwe-iOS, khetha isithonjana semigqa emithathu ekhoneni elingezansi kwesokudla, bese u-Amasethingi> Amasethingi we-Akhawunti> Amavidiyo nezithombe> Dlala ngokuzenzakalela, bese ukhetha okuthi “Ungalokothi Udlale Amavidiyo.”
Misa ukudlala ngokuzenzekelayo amavidiyo ku-Twitter
Ukumisa ukudlala amavidiyo ku-Twitter vakashela ikhasi lewebhu elisemthethweni kwisiphequluli sakho se-pc bese ungena ku-akhawunti yakho. Manje Chofoza isithombe sakho ekhoneni eliphezulu kwesokudla, bese ukhetha 'Izilungiselelo nobumfihlo.' Chofoza okuthi “Ukufinyeleleka” ezansi impela kwekholomu kwesobunxele bese ususa ukumaka ku- “Ukudlala ividiyo ngokuzenzekelayo.”
Ukumisa i-Twitter edlala ividiyo ngokuzenzekelayo ku-iOS naku-Android, Kuhlelo lokusebenza lwe-Twitter, khetha i-avatar yakho ekhoneni eliphezulu kwesokunxele bese ulandela izinyathelo ezifanayo.
Vala uhlelo lokusebenza lokudlala i-Instagram
Uhlelo lokusebenza lwe-Instagram alunikezi inketho yokukhubaza ngokuphelele ukudlala okuzenzakalelayo kwevidiyo. Kepha ungakhetha ukusebenzisa inketho yedatha encane, ewusizo kulabo abanomkhawulokudonsa onqunyelwe inyanga ngayinye. Kuselula, vula uhlelo lokusebenza lwe-Instagram iya kuphrofayela yakho, khetha isithonjana seGear (iOS) noma i-hamburger (Android) ngaphezulu kwesokudla, khetha i-Cellular Data Use, bese ukhetha Sebenzisa Idatha Encane.
Misa ukudlala ngokuzenzekelayo kwevidiyo ku-LinkedIn
Ukukhubaza ukudlala ngokuzenzakalela kwawo wonke amavidiyo axhunywe ku-Vakashela ikhasi lewebhu bese ungena ngemvume ku-akhawunti yakho.
Chofoza isithonjana Me phezulu ekhasini lakho eliyisiqalo le-LinkedIn.
Khetha izilungiselelo nezobumfihlo kusukela ekwehlisweni.
Ngaphansi kwesigaba sezintandokazi zesayithi sethebhu ye-Akhawunti, chofoza u-Shintsha eduze kokudlala amavidiyo ngokuzenzekelayo.
Chofoza ukuguqula ukuze ushintshe isethingi ibe yi- Akunjalo .
Chofoza Vala .
Uma ungumsebenzisi we-Android noma we-IOs
Thepha isithombe sakho sephrofayela.
Thepha i- Amasethingi isithonjana ekhoneni eliphezulu kwesokudla sephrofayela yakho.
Use I-akhawunti ithebhu, thepha Dlala ngokuzenzakalela amavidiyo .
Khetha okuthandayo ohlwini lwezinketho:
Ungalokothi udlale amavidiyo
Ukuxhumeka kwe-Wi-Fi kuphela
KuDatha Yeselula nokuxhumeka kwe-Wi-Fi
Izinguquko zakho zizolondolozwa ngokuzenzakalela.
Lokho konke kunethemba lokuthi lokhu kusiza ekumiseni amavidiyo azidlalela wona kumasayithi asakazwayo asakazwayo nasezingosini zokuxhumana. Udinga noma yiluphi usizo ukhululeke ukuxoxa. Futhi, funda 5 izixazululo ezisebenzayo zokulungisa uhlelo lokusebenza lweNetflix olungasebenzi kumawindows 10.
Ama-iTunes awakwazanga ukuxhuma kuleli phutha elingaziwa le-iphone
isikrini sami siba mnyama lapho ngidlala imidlalo
iphutha_connection_timed_out windows 10 chrome
ukwehla kwememori windows 10
windows 10 ngeke ivale ngemuva kokuvuselelwa
awukho umsindo kumafasitela we-chrome 10